UNHCR မှ မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်များစာရင်းကောက်ခံ > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / သတင်း / UNHCR မှ မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်များစာရင်းကောက်ခံ
UNHCR မှ မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်များစာရင်းကောက်ခံ
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ May 28, 2012 သတင်း4Comments 196 Views
နဒီမွန် – ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR မှ မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေကြသည့် ဒုက္ခသည်များစာရင်းကို မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှစပြီး စတင် ကောက်ခံနေကြောင်း သိရသည်။
ဒုက္ခသည်စာရင်းကောက်ခံရာတွင်မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များကို ဒေသအလိုက် လူမျိုးအလိုက် တစ်ရက်စီ မေလ ၂၂ မှ လကုန်ထိ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်က ဒုက္ခသည်စာရင်းကောက်ယူချိန်တွင် ဘယ်လိုအခက်အခဲကြောင့် ယခုလို ဒုက္ခသည်အဖြစ်နှင့် ရပ်တည်နေရကြောင်းအစရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းစုံမေးမြန်ပြီး ဒုက္ခသည်စစ်မှန်ပါက ၇ ရက်အတွင်း UNHCR အသိအမှတ်ပြုကဒ် ထုတ်ပေးသည်။
“အခုကောက်ခံတဲ့ပုံစံက အရင်ကလို မေးမြန်းတာမရှိဘူး၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေထိုင်သည့်ဒေသ၊ မလေးရှားကိုရောက်လာတဲ့အချိန် စတာတွေ မေးမြန်းတယ်” ဟု UNHCR ရုံးတွင် ဘာသာပြန်ပေးနေသူ နိုင်ဥက္ကာက ပြောသည်။
ယခုလိုမျိုး စာရင်းများကောက်ခံခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ကောက်ခံသည့်အကြောင်းအရာကိုလည်း ပြောကြားခြင်းမရှိကြောင်း နိုင်ဥက္ကာက ပြောသည်။
စာရင်းပေးသွင်းခဲ့သူ မွန်အမျိုးသမီး မိခိုင်က “ဒုက္ခသည်တွေ စာရင်းကောက်ခံတာ ကြားတော့ သွားသွင်းတာပေါ့၊ UN ကဒ်ရတဲ့အထိတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်း မသိဘူး အမည်၊အသက်၊ နေထိုင်တဲ့နေရာ၊ မလေးကိုဘယ်အချိန်ရောက် အဲလောက်နဲ့ သူတို့ပေးတဲ့စာရွက်မှာ ဖြည့်တယ်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်၊ နောက်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပဲ ပြောတယ်”
စာရင်းသွင်းခဲ့သည့်ဒုက္ခသည်အများစုက ယခုလို တစုံတရာ ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ ဒုက္ခသည်များစာရင်းကို ထူးခြားစွာကောက်ခံနေသည့်အပေါ် စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။
မလေးရှားသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့်ဒုက္ခသည်အများစုသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ရရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေကြပြီး၊ UN ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်အတွက်လည်း အဆင်ပြေမှုရှိသည်။ သို့သော် UN ကဒ်မရှိသူတို့က အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ခက်ခဲသည့်အပြင် မလေးရှားရဲတို့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းဘေးကိုလည်း ကြောက်ရွံ့နေရသည်။
ကဒ်မရှိသူတို့က ဒုက္ခသည်စာရင်းများ လိုက်လံကောက်နေခြင်းအပေါ် UNHCR မှ ကဒ် ထုတ်ပေးရန်လည်း မျှော်လင့်နေကြသည်။
မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကောက်ခံသည့်စာရင်းများအရ UNHCR ကဒ်မရှိသေးသည့် မွန်ဒုက္ခသည် တစ်ထောင်ကျော် ရှိပြီး UNHCR ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ မွန်ဒုက္ခသည် ၇၀ဝ၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Previous ဘုရားသုံးဆူမှာ ပြန်ပေးထပ်ဆွဲပြီ
Next နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ် ဘာလုပ်နေတာလဲ (အမှတ်-၁)
sai saeng sro
you group… not SHAN why
Dear ! Don;t worry for Shan…According to the news,they (UNHCR ) did Biodata Collection all ethnics( Kachin /Karenni / Karen / Chin / Mon /Shan ) except Arrakan.
( ဒုက္ခသည်စာရင်းကောက်ခံရာတွင်မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များကို ဒေသအလိုက် လူမျိုးအလိုက် တစ်ရက်စီ မေလ ၂၂ မှ လကုန်ထိ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ) This is kind of wrong information given or I don’y\_t know.The update news was they stopped for CHIN according to the sources.
Mon News ….Please better check this out with your Malaysia Counterpart.
လုပ်စားလိုက်ကြဦးပေါ့ ..လာပြန်ချေသေးရဲ့တဂွင် ပေါ့..ဟတ်ဟတ်
နဒီမွန် ! You got the unfruitful information.U better check with your Malaysia fella UNHCR ရုံးတွင် ဘာသာပြန်ပေးနေသူ နိုင်ဥက္ကာ